Xisbiyada garabka midig oo ka gaabsadey iney la shaqeeyaan MP - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiyada garabka midig oo ka gaabsadey iney la shaqeeyaan MP
La daabacay onsdag 26 november 2014 kl 15.32
Xisbiyada hanti-wadaaga ee garabka midig, ahna xisbiyada mucaaradka ayaa ku gacan saydhay in ay xisbiga MP kala shaqeeyaan arrimaha hawlgabka. Sida ay ku qoreen bogga dooda ee jariirada Dagens Nyheter
Xisbiga Socialdemokraterna oo isagu wada shaqayn kala leh xisbiyada garabka midig arrimaha dadka hawlgabka ah ayaa rabay in xisbiga ay dawlad wadaagta yihiin ee Miljöpartiet uu xildhibaanadiisa baarlamaanka ku soo daro, kooxda baarlamaanka ee ka wada shaqaysa arrimaha hawlgabka.
Balse afarta xisbi ee isbahaysiga garabka midig oo ka tirsan kooxdan baarlamaanka ee ka wada shaqaysa arrimaha hawlgabka ayaa arrintaas ka biyo diiday oo aan rabin in ay la shaqeeyaan xisbiga Miljöpartiet. Sidaa waxaa leh Erik Ullenhag oo isagu ah hogaamiyaha xildhibaanada baarlamaanka ee xisbiga Folkpartiet.
-Xisbiga Bi’adda ee Miljöpartiet, wuxuu aaminsan yahay in aynu shaqayn in yar, sidoo kale wuxuu shaki gelinaya kobaca dhaqaalaha. Labadaas arrimood oo door ka ciyaaraya in aan in aan yeelano barnaamij hawlgab oo wanaagsan. In aan shaqayno waqti badan, Sweden-na ay noqoto waddan dhaqaalihiisu koraayo, middaas oo ah sida aynu u shaqaynaynay 20 sanno hadda, ayaa ah mid ay ammaan ku dareemin karaan dadka hawlgabka ahi. Sidaa awadeed maaha in aan arrimahan kala shaqayno xisbi ka soo horjeeda waxyaabahaas asaasiga u ah heshiiskan. Sidaa ayay u dhigeen hadalkooda xisbiyada isbahaysiga ee mucaaradku.
Isha:DN debatt, Ekot